talk with Kyaw Ko Ko
“ရိုးသားမယ်။ ပွင့်လင်းရမယ်။ ရဲရဲလုပ်ရမယ်၊ အစိုးရကို အဲလိုပြောချင်တယ်”
Eleven Media Group – http://www.weeklyeleven.com
ဇန်န၀ါရီ ၁၃ တွင် တောင်ကြီးထောင်မှ ပြန်လွတ်လာသူ ဗကသ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုကျော်ကိုကိုနှင့် Eleven Media Group အင်တာဗျူးကို ကူးယူ ဖော်ပြပါသည်။
မေး – ၂၀၀၇ခုနှစ် လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ ပါဝင်တဲ့နေရာမှာ ဗကသ (ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ)ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေ ပါခဲ့တယ်။ ဗကသ ဆိုတာ အစဉ်အလာ ကြီးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၉၆၂ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာ ပျောက်သွားခဲ့ရတယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့နဲ့ အတူ ပေါ်ခဲ့ပေမယ့် ထပ်ပြီး ပျက်သွားခဲ့ရပြန်တယ်။ ၂၀၀၇ခုနှစ်မှာတော့ ကိုကျော်ကိုကိုတို့ ဦးဆောင်ပြီး ထပ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ (ကို) အောင်ဝေး ရေးသလိုဆိုရင်တော့ ကိုဗဟိန်းမှသည် ကျော်ကိုကို အထိ။ တူညီတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ။ ကိုကျော်ကိုကို အနေနဲ့ ၂၀၀၇ခုနှစ်မှာ ဗကသကို ဘာကြောင့် ပြန်ပြီး ဖွဲ့ဖြစ်ခဲ့တာပါလဲ။
ဖြေ – ၂၀၀၇ခုနှစ်၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဗကသများ အဖွဲ့ချုပ်ကို စတဲ့ ကိစ္စမှာပေါ့ ကျွန်တော်တို့က ပထမပိုင်းမှာ ကျောင်းသားထု တစ်ရပ်လုံးရဲ့ ကြားထဲမှာ မခံမရပ်နိုင်အောင် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေပေါ့ နော်။ အနှိမ်ခံ၊ အချိုးခံရလို့ဆိုပြီး ကျောင်းသားတွေက ခံပြင်းတဲ့ ဒေါသတွေ ထွက်တယ်ပေါ့။ အဲဒီ ဒေါသတွေက နေရာအနှံ့မှာ စီးမျောတဲ့ အခါကျတော့ ပေါက်ကွဲမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဒါဟာ ပရမ်းပတာ ပေါက်ကွဲသွားလို့ရှိရင် ကျောင်းသားထုလည်း နာမည်ပျက်မယ်၊ သိက္ခာကျမယ်။ ကျောင်းသားထုအတွက် ဒီပေါက်ကွဲမှုအားလုံးကို Control လုပ်မယ်။ Lead လုပ်မယ်။ စုစည်းပေးပြီး မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ် တင်ပေးနိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းမျိုးက အဲဒီအချိန်ကာလမှာ မရှိသေးဘူး။ ဒီအဖွဲ့အစည်းမျိုးဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့က ဖန်တီးရမယ်၊ ကြိုးစားရမယ်။ အဲဒီ အတွေးကို ရတယ်။
ရတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်က စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် ရွာသာကြီးက။ အခြား သူငယ်ချင်းတွေကျတော့ ဒဂုံ တက္ကသိုလ်က ပါမယ်။ အနောက်ပိုင်း တက္ကသိုလ် ပါမယ်။ အရှေ့ပိုင်း တက္ကသိုလ်ပါမယ်။ ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ်၊ GTC အစရှိသဖြင့်။ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးက အမေရိကန်စင်တာမှာ Book Club တစ်ခုဖွင့်တယ်။ အဓိက ကတော့ စာပေဆွေးနွေးပွဲလေး တစ်ခုပါပဲ။
အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ တိုင်ပင်ကြတယ်။ တိုင်ပင်ကြတဲ့ အခါမှာ ကျောင်းသားထုက ဘာတွေ မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်နေလဲ၊ ဘာတွေ ဒေါသဖြစ်နေလဲ။ အစစ အရာရာပေ့ါဗျာ။ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ ကြီးမြင့်လာတယ်။ ကုန်းဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်လာတဲ့ ဂယက်က မိဘတွေက တစ်ဆင့် ကျောင်းသားတွေကို ရိုက်ခတ်လာတယ်။ တစ်ချို့ ကျောင်းသားတွေဆိုရင် ကျောင်းတက်ဖို့၊ ကျောင်းကို လာဖို့အတွက်တောင် လမ်းစရိတ် မဖူလုံတာတွေ ရှိလာခဲ့တယ်။ လမ်းစရိတ်ပေးလိုက်ရတဲ့ အတွက် တစ်နေကုန်ဘာမှ မစားရတော့တဲ့ ကျောင်းသားတွေ ရှိလာတယ်။ စာပေ သင်ကြားရေးအတွက် စာအုပ် စာတမ်း အခက်အခဲတွေ၊ ကျောင်းမှာလည်း အခြား facility မလုံလောက်မှုတွေ ရှိလာခဲ့တယ်။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်နေတဲ့ အထွေထွေ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ အတွက် ဆိုရင် ကျောင်းသားထုကို ကိုယ်စားပြုပြီး တောင်းဆိုတဲ့ ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ဆိုတာ ရှိရမယ် ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ အကြံ ထုတ်ကြတယ်။
အရင်တုန်းက သမဂ္ဂကို ပြန်ပြီးကြည့်တဲ့အခါ သမိုင်းအစဉ်အလာက ကြီးခဲ့တယ်ဗျ။ ၁၉၃၆ခုနှစ် ဒုတိယ ကျောင်းသားသပိတ်မှာ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ(ဗကသ) ဆိုပြီး ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီကမှ တစ်ဆင့် တောက်လျှောက်မှာ ကျောင်းသားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို တောင်းဆိုရင်းနဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက် အစိုးရတွေရဲ့ ဖိနှိပ်မှုကို တွန်းလှန်ရင်း ဗကသများ အဖွဲ့ချုပ် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ အဲဒါတွေကို သွားတွေ့ရှိတယ်။ သွားတွေ့ရှိတော့ ကျွန်တော်တို့ လက်လှမ်းမီသလို စာအုပ်တွေ ဖတ်တယ်။ အရင် ဗကသဟောင်းမှာ ပါဖူးတဲ့သူတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်တယ် အကြံဉာဏ်တွေ ယူတယ်။ လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေကို မေးတယ်၊ မြန်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်း ဖွဲ့တဲ့အခါကျတော့ ကျောင်းသားတွေပဲ၊ လက်ရှိကျောင်းတက်နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေပဲ ဦးဆောင်ပြီးတော့ ဖွဲ့ကြတယ်။
အဲဒီထဲမှာ Founder ကတော့ လေးယောက်။ ဒီ လေးယောက်လုံးက အားလုံးလိုလို ထောင်ကျပြီးတဲ့အတွက် အခု အကုန်လုံး အသီးသီးပဲ ပြန်လွတ်လာကြ ပြီ။ ကျွန်တော် ပါတယ်။ ကိုစည်သူမောင်ကို အဓိက ခေါ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ မဟန်နီဦးကို ခေါ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကိုလင်းထက်နိုင် ဆိုတာ ခေါ်လိုက်တယ်။ ဒီလေးယောက် တိုင်ပင်လိုက်တဲ့ အခါကျတော့ နိုင်ငံခြား မီဒီယာကနေ မေးမယ်၊ မြန်းမယ်၊ ကြေညာချက်ထုတ်မယ် ဒါတွေ ရှိလာခဲ့တယ်။ ဗကသက ၂၀၀၇ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ပြန်လည် ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ အဲဒီနေ့ကို ဘာကြောင့် ရွေးရလဲဆိုတော့ ၁၉၈၈ခုနှစ်က ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ ဗကသ ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ နေ့ကို အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ သမိုင်းတန်ဖိုးရှိတဲ့နေ့ကို ကျွန်တော်တို့ ရွေးလိုက်တယ်။ ရွေးပြီးတော့ ကိုဒီငြိမ်းလင်း၊ နောက်တစ်ခါ မဖြိုးဖြိုးအောင်၊ ကိုရဲမြတ်ဟိန်း အစရှိတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ခေါ်ပြီးတော့ အသိပေးတယ်။ အသိပေးတယ် ဆိုတာက ဗကသ ဖွဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့။
အဲဒီတော့ တို့ ဆက်လုပ်ဖို့ အစီအစဉ်တွေ တိုင်ပင်ပြီး ဆွဲကြမယ်။ အဲဒီတုန်းက သံဃာထုက ရှေ့ထွက် မလာသေးဘူး။ ကျွန်တော်တို့က ကြေညာချက် ထုတ်တယ်။ စာဝေရင်းနဲ့ စာကြဲရင်းနဲ့ အခြေခံကျောင်းသားတွေ အပါအ၀င် ကျောင်းသား အားလုံးကို စည်းရုံးထားတယ်။ လက်လှမ်းမီသလောက်ကို နီးစပ်ရာ တူရာ တူရာစုထားတယ်။ အဖွဲ့တွေကို ဖွဲ့ထားတယ်။ အဲဒီကမှတစ်ဆင့် လူကြီးတွေ အပြင်မှာ ဘာလုပ်သလဲ ဆိုတာကို ကြည့်တယ်။ ၈၈ကျောင်းသားအဖွဲ့က လောင်စာဆီ အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ လမ်းလျောက် ဆန္ဒပြတာတွေ ရှိလာတယ်။
သူတို့ မကြာခင်မှာ ပါသွားတယ်။ ဖမ်းဆီး ခံရတယ်။ သြဂုတ်မှာ ပါသွားတယ်။ ပါသွားတဲ့ အခါကျတော့ သမဂ္ဂအလံကို လဲမသွားအောင် ဆက်ထိန်းဖို့၊ ဆက်ကိုင်ဖို့၊ ကျွန်တော်တို့ အဲဒီ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့၊ သမဂ္ဂအလံကို ဆက်လွှင့်ဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ထွက်မှ ဖြစ်တော့မယ် ဆိုပြီးတော့ အခြေအနေအရ လမ်းပေါ်ထွက်လာရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သံဃာတော်တွေကလည်း ပခုက္ကူကနေစပြီးတော့ သပိတ်မှောက် ကံဆောင်တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ သံဃာတော်တွေ နောက်ကနေ ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်ပါပြီးတော့ ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။
မေး။ ဗကသကို ဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာ ကိုကျော်ကိုကိုရဲ့ အသက်က ၂၆နှစ်ရှိပါပြီ။ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှာ မဟာတန်းတက်နေစဉ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ပညာရေးပိုင်းပါ။ နောက် ဗကသဖွဲ့ဖို အတွက် အခုစိတ်ကူးရ၊ အခု ထလုပ်လို့လည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဗကသဖွဲ့ဖို့ ရည်မှန်းထားတဲ့စိတ်က ဘယ်လို ကိန်းအောင်းခဲ့တာပါလဲ။
ဖြေ – ဒီလိုဗျ။ ကျွန်တော်ရဲ့ ဘ၀တစ်လျောက်လုံးကို ငယ်ငယ်တည်းက သူများတွေလို ပြေးလွှား ဆော့ကစားတဲ့ အပိုင်းမှာ အားနည်းခဲ့တယ်။ အားနည်းတဲ့ အပိုင်းကလည်း ကျွန်တော့်ကို စိတ်မချလို့၊ မိဘတွေက အပြင်ကို ပေးမလွှတ်တာတွေ ဘာတွေပေါ့။ ကျွန်တော့် ကျန်းမာရေးကလည်း သိပ်ကောင်းတာ မဟုတ်တော့။ အဲလို အချိန်မျိုးမှာ အိမ်ထဲနေရင်း စာဖတ်တာတွေကို တလျှောက်လုံး လုပ်ခဲ့တယ်။ အိမ်မှာ စာအုပ်စာတန်းလည်း စုံတဲ့အခါကျတော့ ဟိုတုန်းက စာအုပ်အဟောင်းတွေ ပြန်ဖတ်မိတယ်။ အဲဒီထဲမှာ လက်လှမ်းမီသလို အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းဟောင်းတွေ၊ ဟိုးရှေးခေတ်က သမဂ္ဂသမိုင်းတွေ၊ အဲဒါ ပြန်လေ့လာမိတာလေးတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီမှာ ideal ဖြစ်ဖို့ person တွေပေါ့နော် – ကိုအောင်ဆန်း၊ ကိုဗဟိန်း၊ ကိုလှရွှေ အစရှိသဖြင့် ရာဇ၀င်တွေကို လေ့လာတယ်။ လေ့လာရင်း ကျွန်တော် သူတို့ကို အားကျတယ်။ အားကျရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက သူတို့ဟာ သမိုင်းပေးတာဝန်ကို၊ ပုခုံးပေါ်ကျလာတဲ့ သမိုင်းပေးတာဝန်ကို မငြီးမငြူ ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သူတို့ဟာ သမိုင်းမှာ တင်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ လူတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို လူတွေက တသသနဲ့ ပြောကြတုန်းပဲ၊ ဆိုကြတုန်းပဲ။ ဒီလိုပြောကြ၊ ဆိုကြတာက သူတို့လုပ်ရပ်က အများပြည်သူအတွက် အကျိုးရှိလို့ပေါ့။ မှန်ကန်လို့ပေါ့။ ကျွန်တော်က အဲဒီလိုသွားပြီးတော့ ယုံကြည်လိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်လည်း လူငယ်ပီပီ၊ အဲဒီလို လူငယ်တွေကို အားကျချင်တဲ့ စိတ်ပေါ်ပေါက်လာတယ်။
ပြီးတော့ အခုခေတ်လူငယ်တွေရဲ့ သဘောတရားက လမ်းပျောက်နေတာ များတယ်ပေါ့နော်။ လမ်းပျောက်ရတဲ့ အကြောင်းတရားကလည်း အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့်ပေါ့။ အထူးသဖြင့် လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး စတဲ့ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် ရှေ့ဆက်ရမယ့် အနာဂတ်ကို မမြင်ဘူး။ မှုန်ဝါးနေကြတယ်။ အဲဒါက ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအတွက် အလားအလာ မကောင်းဘူးဗျ။ သမိုင်းပေးတာဝန်က ဒီဟာကို အရင်ဆုံးဖယ်ခွာရမယ်။ အကြောက်တရားတွေ၊ ထိုင်းမှိုင်းမှုတွေ၊ လေးလံမှုတွေကို ဖယ်ခွာရမယ်လို့ ကျွန်တော်က ယုံကြည်လိုက်တယ်။ ဒါမှလည်း မျိုးဆက်တစ်ဆက်က တစ်ဆက် အဆင့်မြင့်လာမယ်ပေါ့နော်။ ကျွန်တော်က အဲလိုထင်တယ်။ ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့် အဲဒီကိစ္စကို ကြိုးစားဆောင်ရွက်ဖို့ အစဉ်တစိုက် အတွေးထဲမှာရှိတယ်။
ကျောင်းမှာကတော့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဘ၀မှာ လူမှုရေးအဖွဲ့လောက်ပဲ အဒီအချိန်မှာ ဖွဲ့လို့ရတာကိုး။ ကူညီမှုလေးတွေကို ကျွန်တော်တို့ စလုပ်တယ်။ သာရေးနာရေးတွေ စလုပ်တယ်။ တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုကျောင်းသားတွေရဲ့ ပွဲတွေကို လိုက်တတ်တယ်။ သူတို့လိုအပ်ချက်တွေ ဘာရှိလဲ၊ ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်ချက်တွေ ဘာရှိလဲ။ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ပြောကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်ကျတော့ နယ်စုံတယ်ပေါ့လေ။ အဲဒါတွေလုပ်ရင်း သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေ ပေါများလာတယ်၊ သူတို့ခံစားချက်တွေနဲ့ ကျွန်တော်ခံစားချက်တွေ တစ်ထပ်တည်းကျတာ တွေရှိလာတယ်။ သူတို့က ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာကိုသာ မသိကြတာ။ ဒါနဲ့ အားလုံးညှိနှိုင်းပြီးတော့ သမဂ္ဂဆိုတာ ရှိရင် လမ်းစပေါ်ပြီ ဆိုပြီးတော့ အဲဒီအတွေးနဲ့ ရှေ့ဆက် လျှောက်ခဲ့ကြတာပါ။
မေး – ဗကသ ဥက္ကဋ္ဌနေရာတွက် တာဝန်ကို အာလုံးက ၀ိုင်းပေးခဲ့ တာလား။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်သဘောနဲ့ပဲ ယူခဲ့တာလား။
ဖြေ – ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော်တော့ ဥက္ကဋ္ဌဆိုပြီး မသတ်မှတ်ပါဘူး။ သဘောကတော့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရတဲ့ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲ အဖွဲ့က တာဝန်ပေးအပ်ထားတယ်။ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပေမယ့်ပြောရင်း၊ ပြောရင်း ကနေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျွန်တော်ပြောတဲ့ လိုင်းက Policy Maker ဖြစ်လာရတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ညှိနှိုင်းပြီး လုပ်တာပါ။ တစ်ယောက်တည်း မလုပ်ပါဘူး။ collective leadership အနေနဲ့သွားတာပါ။ သူတို့က ကျွန်တော့်ကို ဦးတည်ပြီးတော့ပဲ အစစ အရာရာပြော ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီကစပြီးတော့ ပြည်ပ မီဒီယာတွေက ကျွန်တော့်ကို ရေးကြတယ်။ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဥက္ကဋ္ဌဆိုပြီးတော့၊ ပြည်ပ မီဒီယာတွေက ပေးလိုက်တဲ့သဘော ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းသားတွေက လက်ခံတယ် ဆိုပြီး အခုချိန်ထိတော့ ယုံကြည်ထားကြတယ်ပေါ့နော်။ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားတွေ အားလုံးပြန်လွတ်လာတော့မှ ဥက္ကဋ္ဌက ဘယ်သူ၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌက ဘယ်သူဆိုပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။
မေး – ဗကသ ဖွဲ့ပြီး ၇ လလောက် အကြာမှာ အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်။ ကိုဉာဏ်လင်းအောင်နဲ့ အတူ တွဲလျက်ဖမ်းခံလိုက်ရတယ်။ ဒီနောက်မှာ ပထမ ၃ နှစ် ထောင်ကျတယ်။ မကြာဘူး။ နောက်ထပ် ၃ နှစ် ထပ်တိုးတယ်။ တစ်ခါ ၂ နှစ်ထပ်ပေါင်းတယ်။ အဲဒါက ဘယ်လိုဖြစ်သွားခဲ့တာလဲ။ နောက်ပြီး ကိုကျော်ကိုကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ တရားစီရင်မှု အတွေ့အကြုံကို ပြောပြပါဦး။
ဖြေ – ကျွန်တော့်ကို စဖမ်းတဲ့အခါမှာ ကိုဉာဏ်လင်းအောင်နဲ့ တွဲပြီးတော့ ပေါ့နော်။ ၃၂(ခ)ဆိုတဲ့ ဗီစီဒီပေါ့။ တရားမ၀င် လိုင်စင်မဲ့ ကိုင်ဆောင်မှု ဆိုပြီးတော့ ဖမ်းတယ်ဗျ။ တော်တော်တော့ ရယ်စရာကောင်းတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီ ဗီစီဒီ ဘာလဲဆိုတာ ကျွန်တော် မမြင်ဖူးဘူး။ ကြည့်လည်း မကြည့်ရဘူး။ ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာက ကိုဉာဏ်လင်းအောင် လက်ထဲမှာ စီဒီတစ်ချပ် တွေ့တယ်ပေါ့။ အဲဒီဟာက အားလုံးအတွက် ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ သူတို့ အဲဒီအချိန် ကာလက လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက် ၀ါဒဖြန့်ဖို့ လုပ်ထားတဲ့ ဗီစီဒီ အဲလိုမျိုး ပြောကြတယ်ဗျ။ ဒါက ရုံးတော်မှာ ကြားရတဲ့ သတင်း။ ကျွန်တော်က အဲဒီဗီစီဒီမှာ ဘာပါသလဲဆိုတာ ဒီနေ့အထိ မမြင်ဖူးဘူး။ ကြည့်လည်း မကြည့်ဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့် ချိတ်ချင်တဲ့ အခါကျတော့ လှမ်းချိတ်လိုက်တာပဲ။ အဲဒီကိစ္စကြီးကလည်း ပြောရခက်တယ်။ အမှန်တကယ်တော့ လူကို ဖမ်းတာပါ။ ကိုမင်းကိုနိုင်ပြောသလို ဆိုရင် ဖမ်းတာကလည်း နိုင်ငံရေး၊ အခုလွှတ်တာကလည်း နိုင်ငံရေးပါပဲ။ အဲဒီသဘောပါပဲ။
အမှန်တကယ်က ၃၂(ခ)ဆိုတဲ့ ပုဒ်မကို ကျွန်တော်က လုံးဝ မကျူးလွန်ခဲ့ပါဘူး။ မကျူးလွန်ပေမယ့် ကျွန်တော့်ကို ဘာကြောင့် ဖမ်းဆီရသလဲဆိုရင် ဒီသမဂ္ဂနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက် လူကို လိုချင်တယ်။ လူကို ဖမ်းချင်တယ်။ လူကို ထိန်းထားချင်တယ် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကြီး ပါနေတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်လေ။ အဲဒီလိုနဲ့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် အင်းစိန်ထောင်မှာ ကျွန်တော်ထောင်ကျခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကမှတစ်ဆင့် ကျွန်တော် တောင်ကြီးထောင်ကို ပြောင်းသွားပါတယ်။
ပြောင်းရွှေ့ ခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အဲဒီအချိန်ကာလရဲ့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦးရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အရ ဆိုပြီး ကျောက်တံတား ရဲစခန်းကနေ တောင်ကြီးထောင်ကို ရောက်လာပြီး ပြန်လည် ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။ ထပ်ပြီး အင်းစိန်ထောင်မှာ တရားရင်ဆိုင်ရတယ်။ အကြောင်းရင်းက ၂၀၀၇ခုနှစ် စက်တင်ဘာမှာ ဆူးလေဘုရားလမ်းမှာ တရားဟောခဲ့တယ်တဲ့၊ အဲဒီအချက်ရယ်၊ နောက် သမဂ္ဂဖွဲ့စည်းမှုဟာ သင်း/ဖွဲ့ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ နဲ့ ငြိစွန်းတယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကို နောက်ထပ် ၃ နှစ် တစ်မှု၊ ၂ နှစ် တစ်မှု ထောင်ချလိုက်တဲ့အခါ စုစုပေါင်း ၈ နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်တော့်ကို မြို့နယ်တရားရုံးတွေ၊ အပြင်ပေါ့၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် အဲဒီလိုမျိုး ရုံးတွေကို တင်ပြီး စစ်ပါတယ်။
အဲဒီအနေအထားမှာ ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ လွတ်လပ်မှုက အတွင်းတရားရုံးခေါ်တဲ့ အင်းစိန်ထောင်တွင်းက အထူးတရားရုံးမှာ စစ်တာထက်တော့ မိသားစုတွေ ၀င်တွေ့ခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့ အချက်တစ်ချက်ပဲ ပိုတာရှိတယ်။ ကျန်တာကတော့ ဘာကိုမှ ခုခံချေပခွင့်ကိုလည်း ဆုပ်ဆုပ်ကိုင်ကိုင် မပြနိုင်တဲ့ သဘောဗျ။ ကိုယ့်ဖက်က ရှေ့နေ ပြောတာ မှန်သမျကိုလည်း ပယ်ချတာများပြီး တရားလိုရှေ့နေဖြစ်တဲ့ အစိုးရရှေ့နေ ပြောတဲ့ဟာတွေကို မှန်၏ မမှန်၏ မစဉ်းစားဘဲနဲ့ တရားသူကြီးရဲ့ ဆုံးဖြတ်မှုတွေ တွေ့ရှိ ရတယ်ဗျ။ ဒါတွေကတော့ တရားစီရင်ရေးစနစ်ရဲ့ အားနည်းချက်တွေပဲ။ တရားစီရင်ရေးရဲ့ အထက်မှာ တစ်စုံတစ်ရာရှိနေတယ်လို့ ကျွန်တောတို့ ခံစားလိုက်ရတယ်။ အဲဒီတုန်းက အခြေအနေတွေပေါ့။
ကျွန်တော်နဲ့အတူ အမှုတွဲဖြစ်တဲ့ ကိုဉာဏ်လင်းအောင်ကတော့ ပထမအမှုဖြစ်ပြီးတဲ့ ဗီဒီယိုအက်ကို ၃ နှစ်ကျပြီးတော့ နောက်ပြီးတော့ ပြန်လွတ်သွားတယ်။ နောက်အမှု ထပ်မံကျရောက်ခြင်း မရှိတော့ဘူး။ ကိုလင်းထက်နိုင်၊ ဖြိုးဖြိုးအောင်၊ ကိုရှိန်းရာဇာထွန်း၊ ကိုဖုန်းပြည့်ကြွယ် သူတို့ကျတော့ နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်တဲ့ ကာလမှာ လူမှုကူညီရေး သဘော၊ NGO သဘော ဧရာဝတီ တိုင်းမှာ အလောင်းကောက်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ သွားပြီးတော့ ငြိစွန်းတယ် ဆိုပြီးတော့၊ အမှန်တကယ်က အဲဒါ မဟုတ်ဘူး၊ သမဂ္ဂ ဖွဲ့စည်းရေးမှာ ပါတဲ့အတွက် ဖမ်းချင်လို့ နိုင်ငံရေး အရဖမ်းတယ်၊ သူတို့ ထောင်ကျတယ်၊ ၄ နှစ်လောက် သူတို့ ထောင်ကျပြီး ၃ နှစ် ကျော်ကျော်နေတဲ့အခါမှာ ပြန်လည် လွတ်မြောက်သွားတယ်။
ကိုစည်သူမောင်၊ ကိုဒီငြိမ်းလင်း၊ မဟန်နီဦး၊ ကိုရဲမြတ်ဟိန်း သူတို့ကျတော့ နှစ်ကြီးတယ်။ သူတို့က ၅၀၅(ခ)ဆိုတဲ့ လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြမှုကို မြို့နယ် သုံးမြို့နယ်ဖြတ်ရင် ၃ မှု တပ်ခံရတယ်။ ကျောက်တံတား၊ ပန်ဘဲတန်း၊ လသာဆိုရင် ဒီလမ်းကြောင်း လျှောက်လိုက်တာ သုံးမြို့နယ် ကျော်သွားရင် သုံးမှုဆိုပြီးတော့ သူတို့ တရားစွဲခံရတယ်။ အမှန်တကယ်ကတော့ ဖြစ်စဉ်က တစ်ခုထဲ။ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုတည်းကို သုံးမှုခွဲ စွဲတဲ့အခါကျတော့ နှစ်က များသွားတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော့် ထက်ပိုပြီးနှစ်တွေ များခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။ တစ်ချို့ဆိုရင် ၂၀နီးပါးကို ရောက်သွားတယ်။ ဝေးကွာတဲ့ ထောင်တွေမှာလည်း ရွှေ့ပြောင်းခံခဲ့ ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ အားလုံး ပြန်လွတ်လာကြပါပြီ။
မေး – ထောင်ကျနေတုန်း ထောင်တွင်းနေခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ကရော ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
ဖြေ – ကျွန်တော်တို့ထောင်မကျခင် အခြေအနေနဲ့ အခုနဲ့ကတော့ ကွားခြားသွားပြီလို့ ပြောလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ဟိုအရင်တုန်းက အခြေအနေက ICRC မ၀င်ခင်က တော်တော်လေးကို အခြေအနေဆိုးဝါးခဲ့တယ်။ အရင် ကျဖူးတဲ့လူတွေကလည်း ပြောတယ်။ အခုအခြေအနေက ဆေးဝါး၊ အစားအသောက်ဆိုလို့ရှိရင် ပေးသင့်သလောက်လည်း ပေးတယ်။ ကိုယ့်ဘက်ကနေ ၀ယ်ယူသုံးစွဲတာတွေလည်း ရှိတယ်။ အစားအသောက်ကတော့ ပြင်ပထောင်ဝင်စာက ပေးသွင်းတဲ့ အစားအသောက် လည်းပေးတယ်။ ထောင်ကလည်း ကျွေးတဲ့ဟာတွေက အရင်လိုပေါ့ နော်၊ မသန့်ရှင်းတဲ့ အစားအစာတွေ မဟုတ်တော့ဘူး။ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တာတွေကို ကျွေးတာတော့ ရှိပါတယ်။ အဲဒါ အဓိကအချက်ပေါ့နော်။
ဟိုတုန်းကတော့ ပဲတွေ အချဉ်ပေါက်တာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ အဲဒါတွေ မဖြစ်အောင် ထိန်းတာတွေရှိတယ်။ အခြေအနေက အကောင်းကြီးတော့ မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်။ အပြင်ထွက် လမ်းလျှောက်ခွင့်တွေလည်း ရခဲ့ပါတယ်။ အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ လျှောက်။ ပြီးရင် အခန်းထဲပြန်ဝင်ပေါ့။ စာဖတ်ခွင့်၊ သတင်းစာဖတ်ခွင့်၊ ဗီဒီယို၊ ဗီစီဒီကြည့်ခွင့်တွေလည်း ရပါတယ်။ တီဗီကတော့ အခုပေးပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ စရောက်ပြီး ၂ နှစ် အထိတော့ မပေးသေးဘူး။ တိုက်ထဲကို။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ တိုက်တွေလည်း တီဗီကြည့် ခွင့်ရခဲ့ပါပြီ။ အစိုးရမီဒီယာက လာတဲ့ သတင်း၊ အဲဒါတွေကို ကြည့်ရပါတယ်။
မေး – လွတ်လာခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ မေးချင်ပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာက လူထုနဲ့ ယှဉ်တွဲလုပ်ဆောင်တဲ့ လူထုနိုင်ငံရေးကို အားသန်တယ်ဆိုတဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား အုပ်စုရှိနေပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာတော့ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီး လွှတ်တော် နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်မယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ရှိနေပါတယ်။ ကြားထဲမှာ အသက်အငယ်ဆုံး မျိုးဆက်ဖြစ်နေတဲ့ ကိုကျော်ကိုကိုတို့ အုပ်စုက ဘယ်လိုဆက်သွားဖို့ စဉ်းစားထားလဲ။
ဖြေ – ကျွန်တော်ရဲ့ အမြင်ပေါ့။ ကျွန်တော်ရဲ့ အမြင်ကို အရင်ဆုံး ပြောချင်တယ်ပေါ့။ လွှတ်တော်တွင်း နိုင်ငံရေးကို ကျွန်တော်ကတော့ တစ်ဦးတည်းအားဖြင့် စိတ်မ၀င်စားဘူးဗျ။ လတ်တလောမှာ။ လွှတ်တော် ပြင်ပနိုင်ငံရေးမှာ ကိုမင်းကိုနိုင်ပြောတဲ့ လူထုအကျိုးပြုတဲ့ လုပ်ငန်း၊ လူထုနဲ့ တစ်သားတည်းကျတဲ့ နိုင်ငံရေး၊ လူထုလိုက်ပါ ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးမျိုးပဲ ကျွန်တော်က စိတ်ဝင်စားတယ်။ ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ ကျွန်တော် သဘောထားချင်း တိုက်ဆိုင်မှု ရှိပါတယ်။ ဒါဟာလည်း ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သူဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စံပြ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ ရင်ခုန်သံကို ကျွန်တော်တို့ ၀တ်မှုန်ကူးခဲ့ကြတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့ ရင်ခုန်သံချင်း ထပ်တူကျတယ်ပေါ့လေ။ အဲဒီပုံစံမျိုးရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ မျိုးဆက်က ရှေ့မျိုးဆက်တွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် အင်မတန်မှ ငယ်လွန်းတဲ့ အရွယ်တွေပါတယ်။ ငယ်ပေမဲ့ လက်ရှိ လူငယ်မျိုးဆက်ကို ကျွန်တော်တို့က ဦးဆောင်သွားနေရတဲ့ အခါကျတော့ ဒီမျိုးဆက်ဟာ လမ်းကြောင်း တစ်ခုပေါ်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရောက်ရှိဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ပြင်ဆင် ရမယ်၊ ကြိုးစားရမယ်။
အဓိက ဘယ်လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်ဖို့လဲ ဆိုတော့ Civil Society တွေ ပေါ်ထွန်းရေး လမ်းကြောင်းပေါ့နော်။ Civil Society တွေပေါ်ထွန်းရမယ်ဆိုတာ အလကားပြောတာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ Civil Society ရဲ့ အားပေါ့နော်၊ အဲဒီမဏ္ဍိုင်ပေါ့။ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တ တိယ၊ စတုထ္ထမဏ္ဍိုင်ကြီးတွေနဲ့အတူပေါ့နော်၊ အဲဒါ မရှိလို့ရှိရင် ရရှိထားတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် ပေါ့နော်။ မူလအကျပ်အတည်းကို ပြန်လည်ဆိုက်ရောက် သွားနိုင်တယ်။ အဓိကကတော့ လူထုလူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ အားကောင်းဖို့ လိုတယ်။ လူထုလူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ အားကောင်းရေးအတွက် သမဂ္ဂက သမိုင်းအစဉ်အလာကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး ဦးဆောင်သွားမယ်လို့ ကျွန်တော်ရဲ့တစ်ဦးတည်း အမြင်အရ အဲလိုမြင်တယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ညီအစ်ကို သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အမြင်ကလည်း ဒီအမြင်နဲ့ သိပ်ကွာခြားလိမ့်မယ်လို့ မထင်ဘူး။ အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ ပြောရင် ဗကသရဲ့ အမြင်က တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ လူထုလုပ်ငန်းယှဉ်တွဲသွားတဲ့ အနေအထားကို ရောက်လာလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်ကတော့ အမျိုးသားအချင်းချင်း စည်းရုံးညီညွတ်ရေး၊ တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းစည်းရုံးညီညွတ်ရေး၊ ပြည်သူအချင်းချင်း စည်းရုံးညီညွတ်ရေးက တစ်ဆင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဆီကို သွားမယ်။
ဖြေ- လက်ရှိအစိုးရ အနေနဲ့က မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ရေစီးကြောင်းမှာ ပိတ်ဆို့နေတဲ့ အချိန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့ အချက်ကို အရင်ဦးဆုံး စတင်ကိုင်တွယ်လိုက်ပြီ။ အဲမှာ ကျန် ရှိနေသေးတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေလည်း ကျန်နေသေးတယ်။ အများစုကတော့ ထောင်ပြင်ပကို ပြန်ရောက်လာပြီ။ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေအကုန်လုံးပြန်လည် လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမှသာ ဒီစီးကြောင်း ပိတ်ဆို့မှုက အထစ်အငေ့ါ မရှိဘဲနဲ့ ပွင့်လင်းသွားမယ်လို့ ထင်တယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ အထွေထွေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုးထိ ရောက်သွားရင် အကောင်းဆုံးပဲ။ ဒါဆိုမြေပေါ် မြေအောက်မှာရှိတဲ့၊ ပြည်ပကနေ ပြန်လာမယ့်သူတွေ အတွက်လည်း လုံးဝအဆင်ပြေသွားမယ်။ အခုချိန်မှာဆိုရင် ပြန်လာရကောင်းနိုးနိုး၊ မလာရ ကောင်းနိုးနိုး အဲလိုမျိုး စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေ၊ ပူပန်မှုတွေ၊ မတင်မကျ စိတ်မချရတာတွေ ရှိနေတုန်းပဲ။ အစိုးရအနေနဲ့ တကယ်တမ်း ရိုးသား ပွင့်လင်းမယ်ဆိုရင်တော့ အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကို ပေးသင့်တယ်။ ပေးကိုပေးရမယ်လို့ ကျွန်တော် မြင်တယ်။ ဒါပထမအချက်။
ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ ကတော့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ထိုးစစ်ကို ချွင်းချက်မရှိရပ်နားဖို့ ကောင်းနေပြီ။ ထိုးစစ်ရှိနေရင် ဘယ်လောက်ပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ အခုတစ်ရာ ကျင်းပပါစေ ကျည်ဆံတစ်တောင့် လေထုထဲကို ပစ်လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ အသံက ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ အသံကို ဖုံးလွှမ်းသွားတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်။ အဲဒီ အနေအထားမှာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရဖို့မမြင်ဘူး။ အဲဒီတော့ ဒါဟာ ရိုးသားမယ်။ ပွင့်လင်းရမယ်။ ရဲရဲလုပ်ရမယ်၊ အစိုးရကို အဲလိုပြောချင်တယ်။ အခုလုပ် နေတဲ့အစိုးရဲ့ ပြောင်းလဲမှု လုပ်ဆောင်ချက်လုပ်ငန်းတွေဟာ အရှိန်အဟုန် နှေးကွေးနေပါတယ်။
အရှိန်အဟုန် နှေးကွေးခြင်းဟာ တကယ်တမ်းကျတော့ အချိန်ကာလကလည်း အကျပ်အတည်း ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ အချိန်ကာလအခက်အခဲ Time Crisis ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ အဲလိုဖြစ်လာလို့ ရှိရင် အဖက်ဖက်က ကျပ်တည်းလာပြီး တစ်ဖန်ပြန်ကွေ့သွားနိုင်တယ်။ အဲဒီအလားအလာရှိတယ်။ တချို့ လူတွေပြောနေကြတာ ရှိတယ် – နောက်ပြန်လှည့်မယ်။ နောက်ကြောင်း ပြန်လှည့်သွားမယ်ဆိုတဲ့ အလားအလာ။ အဲဒီအလားအလာကို လုံးလုံး မရောက်ခဲ့သည့် တိုင်အောင် အဲဒီအတိုင်းအတာ နီးပါးကို ရောက်သွားနိုင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ရှေ့ကိုပဲ ထာဝရ ရှေ့ဆက်သွား မယ်။ မဆုတ်မနစ်စွာနဲ့ ဆက်သွားမယ် ဆိုရင် ရိုးသား၊ ရဲရင့် ရဲရင့်စွာ ပွင့်လင်းစွာနဲ့ ရှေ့ဆက် လျှောက်ရမယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ အာဃာတထားလို့ မရဘူး။ အရင်တုန်းကဟာတွေကို သင်ပုန်းချေပစ်ရမယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်က တူတာ တွဲလုပ်မယ်။ မတူတာခွဲလုပ် မယ်လို့ ပြောနေတဲ့ အချိန်မှာ အစိုးရအနေနဲ့ တူတာကိုပဲ ရှာကြည့်ရမယ်။ မတူတာတွေကို ဘာလို့ ဆုပ်ကိုင်ထားနေတာလဲ။ ရင်ထဲမှာ ဘာလို့ သိမ်းဆည်းထားတာလဲလို့ ကျွန်တော်မေးချင်တယ်။
မေး- နိုင်ငံရေးပြဿနာအတွက် လမ်းစပေါ်ပြီ ဆိုပေမယ့် တစ်ဖက်မှာက ဆင်းရဲတွင်းနက်နေတဲ့ စီးပွားရေးပြဿနာ ရှိနေပါသေးတယ်။ အခြေခံလူတန်းစားတွေ၊ လူလတ်တန်းစားတွေရဲ့ ဘ၀ အဆင်ပြေနိုင်ဖို့ကိစ္စမှာ စီးပွားရေး တိုးတက်ဖို့က အဓိကကျနေတာကြောင့် ဒီအပိုင်းမှာရော ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဖြေ – စီးပွားရေးပြဿနာဆိုကတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးက စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းတာတွေကြောင့် ချွတ်ခြုံကျခဲ့ရတာပေါ့။ အကြောင်းအရင်းက ၁၉၆၂ အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ပြည်သူပိုင်သိမ်းတယ်။ စီးပွားရေးမူဝါဒကို သူတို့ ထင်သလိုရေးဆွဲတယ်။ ပညာရှင်တွေရဲ့ အကြံဉာဏ်ကို မယူဘဲနဲ့ ရေးဆွဲခဲ့တာတွေရှိတယ်။ အဲဒီကျတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးမှာ သယံဇာတ ယုတ်လျော့ပါးမှုတွေ ရှိလာတယ်။ ပြီးတော့ ထွက်ရှိသမျှ ထွက်ကုန်တွေကလည်း အရည်အသွေး မမီတာနဲ့ ဘယ်နိုင်ငံမှ မ၀ယ်တာ၊ ဈေးကွက်မရှိတာ။ အဲလိုအမျိုးမျိုး ပြဿနာတွေကြုံတွေ့ပြီးတော့ အကျပ်အတည်း ဆိုက်လာတာပေါ့။ အကျပ်အတည်းဆိုက်လာတော့ မြန်မာနိုင်ငံက အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံစာရင်းတောင်မှ ၁၉၈၈ က ၀င်သွားခဲ့တာကိုး။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ စီးပွားရေး လမ်းကြောင်းဖွင့်ပြီ ဆိုပေမယ့်လည်း အစိုးရနဲ့ ပတ်သက်ရင်းနှီးတဲ့ လက်ဝါးကြီးအုပ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပဲ ထွန်းကားခဲ့တာကိုး။ အများပြည်သူကတော့ ဆင်းရဲကျပ်တည်းပြီး သံသရာထဲမှာ နစ်နေတုန်းပဲ ရှိသေးတယ်။ အဲဒီ အခြေအနေမျိုးက တိုင်းပြည်မှာ ရေ ရှည်စွဲကပ်နေတဲ့ ဝေဒနာကြီးတစ်ရပ်လို ဖြစ်နေလို့ရှိရင် ဒီဝေဒနာ နလန်မထူနိုင်သေးတဲ့ ကာလပတ်လုံး နိုင်ငံရေးတိုးတက်မှု လမ်းစကလည်း မြင်မှာ မဟုတ်သေးဘူး။
အခြေခံပြည်သူတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေးဘ၀၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတိုးတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် တိုင်းပြည် တစ်ပြည်က သူများနဲ့ ယှဉ်လိုက်တိုင်း ယှဉ်လိုက်တိုင်းမှာ အများကြီး နိမ့်ကျနေတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ကလည်း မရေရာဘူး။ အဲဒီတော့ လူငယ်တွေအတွက် အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးမယ့် Ground မျိုး ရှိရမယ်။ အဲဒါဟာလည်း ပညာရေးနဲ့ နှီးနွယ်နေတယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်တယ်။ အခု လက်ရှိပေးနေတဲ့ ပညာရေးအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျမှုက ဘယ်တိုင်းပြည်ကိုမှ ယှဉ်လို့မရဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီပညာရေးကို အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာအောင်လို့ အစိုးရက မူဝါဒချမှတ်ပြီး ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်။
အစိုးရကိုလည်း အချို့အပိုင်းတွေမှာ လုံးလုံး အားကိုးလို့ မရခဲ့ဘူး။ အခု အချိန်အထိပေ့ါနော်။ အားကိုးလို့ မရခဲ့တဲ့အတွက် ကိုယ့်နည်းကိုယ့် ဟန်နဲ့ ကြိုးစားနေတဲ့ အလွှာတွေ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်း ရှိတယ်။ NGO တွေ၊ Civil Society တွေ နောက်ပိုင်းပေါ်လာရင် လူငယ်တွေကို ပညာရေးဘက် တွန်းအားပေးမယ်။ အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေက ကိုယ့်နိုင်ငံကနေ ပြည်ပနိုင်ငံကိုထွက် သွားတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်နိုင်ငံကပညာနဲ့ မဖူလုံလို့လည်း ပါတယ်။ ဒီမှာလည်း သင်လာရတဲ့ ပညာနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ လစာမပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ တိုင်းတစ်ပါးမှာပဲ အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ အဲဒီမှာပဲဘ၀ကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသွားပြီး ဒီနိုင်ငံကို ပြန်လှည့် မလာတော့တာတွေ လည်းရှိတယ်။ အဓိကက ပြဿနာက အဲဒါပဲ။ ပညာရေး အဆင့်အတန်း မမြင့်မားမှုကြောင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မဖန်တီး ပေးနိုင်မှုကြောင့် ထိုက်တန်တဲ့နေရာ မရမှုကြောင့် လူငယ်တွေ Brain Drain ဖြစ်သွားရတာပေါ့။ အဲဒါကြောင့် ပြန်ပြင်ရမယ့် မူဝါဒတွေမှာ ပညာရေးကို ထိပ်ဆုံးကထားပြီး ပြင်ဆင်သင့်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ တောင်းဆိုတဲ့ ဗကသရဲ့မူ ငါးချက်မှာ ဒီမိုကရေစီ ပညာရေးဆိုတာလည်း ပါတယ်။ ကျောင်းသားထု အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးဆိုတာလည်း ပါတယ်။ အဲဒီကျောင်းသားထု အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီပညာရေးဟာလည်း ဆက်စပ်နေတယ်။ အဲဒီအချက်ကို ကျွန်တော်တို့ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ ထည့်သွင်း လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။
ဖြေ – နိုင်ငံရေးကို ကြောက်စရာလို့ မြင်နေတာက ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုလို ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါကလည်း မြန်မာနိုင်ငံက အာဏာရှင် အဆက်ဆက်ရဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ နေခဲ့ရတာ အတော်ကြာပြီကိုးဗျ။ ကိုလိုနီကလည်း တစ်နည်းအားဖြင့် အာဏာရှင်ပဲ၊ ဖက်ဆစ်ကလည်း အာဏာရှင်ပဲ၊ နောက်ပိုင်းလည်း အာဏာရှင်ပဲဆိုတော့ အာဏာရှင်အစိုးရက လူထုကို ခြိမ်းခြောက်မှုနဲ့ အကြောက်တရားနဲ့ လွှမ်းမိုးထားခဲ့တယ်။ အဲဒါ ယဉ်ကျေးမှုလိုဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်သူလုထုရဲ့ စိတ်မှာ တကယ်တန်းကျတော့ အကြောက်တရားက လွတ်ကင်းအောင်လို့ ရှာဖွေချင်တဲ့ အမြင်တော့ရှိတယ်။ မီးခဲပြာဖုံး ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။
ဒီအမြင်တွေက၊ အဲဒါတွေကို ဖယ်ရှားပစ်နိုင်တာက ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ ကျောင်းသားတွေ၊ သံဃာတော်တွေပေါ့။ အကျပ်အတည်းကာလတွေ မှာတောင် သူတို့က လူထုကို ဦးဆောင်ပြီး အားပေးခဲ့တယ်၊ မြှင့်တင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေ ကလည်း နိုင်ငံရေးက ကြောက်စရာ မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ လူသားတိုင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ကိစ္စ၊ နိုင်ငံသားတိုင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ကိစ္စ၊ နိုင်ငံသားတိုင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အရေးကို ကိုယ့်အရေး ကိုယ့်အရာလို့ သဘောထားရမယ်လို့ အမြဲတမ်းပြောတယ်၊ အမြဲတမ်း တိုက်တွန်းတယ်။ အဲဒါလေးကို ဆောင်ရွက်ဖို့လဲ ကျွန်တော်တို့က အားပေးတယ်ပေါ့။ ဒါက လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ အလုပ်ဗျ။ ခုနကပြောခဲ့တဲ့ အခက်အခဲကြီး တစ်ခုလုံးကို ကျွန်တော်တို့က ပြောင်းလဲပစ်ရမှာဗျ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ခံယူချက်ကို ပြောမယ်ဆိုရင် ကျမ်းစာတွေမှာပါတဲ့ အတိုင်းပေါ့နော်။ အမှန်တရားသည်၊ သစ္စာတရားသည် သင့်အား လွတ်လပ်ခွင့်ကို ဆောင်ကြဉ်းပေးလိမ့်မည် ဆိုတာမျိုး၊ အဲသဘောမျိုးနဲ့ ကျွန်တော်က အမှန်တရားနဲ့ သစ္စာတရားကို ဆုပ်ကိုင်ထားရင် လွတ်မြောက်ခြင်းကို ရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ အမြင်မျိုး ခံယူချက်ရှိတယ်။ သစ္စာတရားဆိုတာ ဘာလဲဆိုရင် လူသားတိုင်း ဦးထိပ်ထားရမယ့် ကိစ္စ၊ လူသားတိုင်း အချင်းချင်းပေါ်မှာ ခွင့်လွှတ်ရမယ်၊ သည်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေရှိတယ် လူသားတိုင်း အများပြည်သူဘ၀ တိုးတက်ကောင်းစားရေးအတွက် အမှန်တရားကိုပဲ ဆုပ်ကိုင်ရမယ်၊ ပြောမယ်ဆိုလို့ ရှိရင် Right is Might ပေါ့ ဗျာ။ အမှန်တရား အင်အားပေါ့။ အမှန်တရား၊ သစ္စာတရားကို ဆုပ်ကိုင်ထားမှ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ဆောင်ကြဉ်းနိုင်မယ်၊ လွပ်လပ်ခွင့် ရလာလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ကမြင်တယ်။ လွတ်လပ်မှုကို သွားဖို့အတွက် အမှန်တရားနဲ့ သစ္စာတရားရှိမှရမယ်။
ဖြေ – ကျွန်တော် ထောင်ထဲဝင်သွားတဲ့ ကာလမှာ လူတွေက နိုင်ငံရေးအကြောင်းကို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေ မှာတောင်မှ ကျယ်ကျယ် မပြောရဲသေးဘူး။ ပြောလို့ရှိရင် တိုးတိုးတိတ်တိတ် ပြောကြတယ်။ ပြောတာတောင်မှ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်စကြတယ်။ နိုင်ငံရေးတွေ မပါနဲ့ ဆိုတာမျိုး။ နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောရင် နောက်ကျော မလုံဘူးလို့ ခံစားရတယ်။ အဲအချိန်ကာလက အဓိကက ကြောက်နေရတာပေါ့။ ထောက်လှမ်းရေးတို့ သတင်းပေးတို့။
အခုကျတော့ နိုင်ငံရေး ခေတ်တစ်ခေတ်ကို ရောက်တော့မယ်၊ အစပျိုးနေပြီဆိုတော့၊ နိုင်ငံရေးခေတ်ဆိုတာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် နိုင်ငံရေးအကြောင်း ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ခေတ်၊ ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာက ဆွေးနွေးခွင့်ပေးထားလို့ ဆိုတာထက် ကြိုးစားပမ်းစား ကိုယ့်ဟာကို အားထုတ်ပြီး လုပ်လာကြတာ၊ အစိုးရပေးတာထက် ပိုပြီးရအောင် အားထုတ်လာကြတာ၊ သူတို့က ဒီနေရာအထိ ပေးတယ်ဆိုရင် ကိုယ်က ရှေ့ကို ဆက်သွားချင်တဲ့၊ အမြဲတမ်းအား ထုတ်နေတဲ့ စိတ်ရှိမယ်ဆိုရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ နေရာ ရောက်မှာပဲ။ သူပေးတဲ့နေရာနဲ့ တင်းတိမ်ရောင့်ရဲနေလို့ မရဘူးပေါ့။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ နေရာအထိ ရောက်အောင်လို့ ကျွန်တော်တို့က ဆက်လျှောက်ရမှာ။
အခုခေတ် လူတွေက ပြောကြ၊ ဆိုကြတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်သုံးသပ်ကြတယ်။ ဝေဖန်သုံးသပ်တာတွေက ဟိုဘက် ဒီဘက်ရှိမှာပဲ။ အစိုးရဘက်ကို ဝေဖန်တာလည်း ရှိမယ်။ အတိုက်အခံဘက်ကို ဝေဖန်တာတွေလည်း ရှိမယ်။ ဝေဖန်ကန့်ကွက်သံတွေ၊ ဆွေးနွေးသံတွေက ပိုပြီး ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ကြားရတယ်။ ဒါဟာ လူထုကြားထဲမှာ အဓိက ပြောင်းလဲမှုအရာတွေလို့ ကျွန်တော် မြင်ပါတယ်။
မွေးသက္ကရာဇ်- ဒီဇင်ဘာ ၉၊ ၁၉၈၁။
ပညာအရည်အချင်း- B.Com. (Hons.)၂၀၀၅ခုနှစ်၊ M.Com. ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခုနှစ်။ (M.Com အတွက် အောင်စာရင်းတွင် အမည်စာရင်း ပါဝင်ခဲ့သော်လည်း ဘွဲ့ယူရမည့် စာရင်းတွင် မပါဝင်ခဲ့။ )